Waqooyiga Kuuriya oo hawada u dirtay gantaal kale oo fashilmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWaqooyiga Kuuriya oo hawada u dirtay gantaal kale oo fashilmay
April 29, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Waqooyiga Kuuriya oo hawada u dirtay gantaal kale oo fashilmay. [Xigashada Sawirka: EPA]
Seoul-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa gantaal kale hawada u dirtay, sida ay sheegeen saraakiisha milatariga Koonfurta Kuuriya iyo Mareykanka.
Gantaalka ayaa qarxay wax yar kadib markii uu kacay, waana kii labaad oo fashilma intii lagu guda jiray asbuucyadii dhawaa ee laga soo gudbay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Waqooyiga Kuuriya ku eedeeyay in ay sameysay “xushmad daro” ku wajahan Shiinaha iyo madaxweynahooda.
Gantaalka ayaa laga ganay saldhig kuyaala koonfurta gobolka Pyeongan ee waqooyiga caasimada Pyongyang saacadihii hore ee maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen saraakiisha Koonfurta Kuuriya oo ay darisyihiin.
Trump ayaa boggiisaTwitter-ka ku yiri: “Waqooyiga Kuuriya waxay xushmad daro ku sameysay codsigii Shiinaha iyo Madaxweynahooda markii ay maanta tijaabisay gantaalka, inkastoo uusan guulaysan.”
Madaxweyne Trump ayaa dhawaan qaabilay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping waxaana uu ku amaanay sida uu dadaalka ugu bixiyay arrimaha Waqooyiga Kuuriya.
Gantaalka fashilmay ayaa imaanaya saacado kadib markii Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ay ka wadaxaajoodeen barnaamijka nukleerka Waqooyiga Kuuriya.
Xiisada giig-san ee gobolka ka jirta ayaa korodhay dhawaan, iyadoo labada Kuuriya Waqooyiga iyo Koonfurtu ay qaadayaan dhoolatus milatari.
Seoul-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabisay gantaal kale, sida ay sheegeen milatariga Koonfurta Kuuriya. Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay in gantaalku uu ka tiiro gaabanyahay kuwa ay Waqooyiga Kuuriya tijaabisay saddexdii tijaabo ee u dambaysay. [...]